ဘလော့ပို့စ်ဘယ်လောက်များများလဲ။ | Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မေလ 28, 2008 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
ဒီနေ့ငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးခဲ့တယ်။ မင်းရဲ့အကြံအစည်တွေရဖို့လူတွေကိုမင်းကိုမင်းနဲ့သူနဲ့မျှဝေချင်တယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘလော့ဂ်မှာဘယ်လောက်တင်ထားတာလဲဆိုတာကိုပြောပြဖို့လွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းရှိသလား။
နှင့် WordPressအဲဒါတော်တော်လေးရိုးရှင်းပါတယ်။ ပို့စ်တစ်ခုချင်းစီကိုပို့ခြင်းသည် Post ID နှင့်ကွဲပြားခြင်းဖြစ်သည်။ Post ID သည်ပို့စ်အရေအတွက်နှင့်ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် autonumber! :) ဒီဟာကမဟုတ်တာကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်အံ့သြမိပါတယ် ရှုပ်ထွေး အနည်းငယ်။
hosted ဘလော့ဂ် app များနှင့်အတူ, တူ ဘလော့ဂါ၊ POSTID ကိုဘလော့ဂ်များအားလုံးတွင်တာဝန်ပေးထားသဖြင့်၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်သုံးသောပိုမိုလွယ်ကူသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာဂူဂဲလ်မှဆိုဒ်တစ်ခုကိုရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်။ သင်တစ်နှစ်ကိုနှစ်ခြမ်းခွဲနိုင်သည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးတင်ပို့မှုမည်မျှရှိသည်။
Paul Dunay ကိုတောင်းပန်ပါတယ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး podcasts တွေကို!) ကြိုတင်ပြီး။ ကျွန်ုပ်သည်ရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်နှစ်ကို အသုံးပြု၍ ပေါလုတွင် ၁၂၅ ခုရှိသည်။ သူ၌ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်၎င်းသည်မနှစ်က ၅၀၊ ၃၂ ခုရှိခဲ့သည်။
Tags: ကလစ်PR ဖြန့်ဖြူးတပြိုင်နက်တည်းနည်းပညာဆိုင်ရာပစ်မှတ်ဘယ်လို wordpress ကိုဘယ်လို
မေလ 29, 2008 မှာ 6: 54 AM
Lynx command ကို command tool မှတစ်ဆင့်အမြဲတမ်းရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သော link များကိုထုတ်ယူပြီး wc -l သို့ပို့နိုင်သည်။
Kinda ဟာလက်ဆွဲအိတ်တစ်လုံးထဲတွန်းဖို့တူနဲ့တူတယ်။ 🙂
မေလ 29, 2008 မှာ 7: 25 AM
ဂရိတ် post ကိုနှင့်ကြီးသောမေးခွန်း Doug
ငါသည်ငါ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ cranking ရပိုကောင်းပုံရသည်!
မေလ 29, 2008 မှာ 7: 29 AM
ငါသာဓကတစ်ခုအနေဖြင့် blogger အခြေပြုဘလော့ဂ်တစ်ခုကောင်းကောင်းလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။
မေလ 29, 2008 မှာ 8: 09 AM
သို့မဟုတ် - ကျွန်ုပ်၌ဂူးဂဲလ်ရှာဖွေခြင်းနှင့်အထူး Lynx အမိန့်များကဲ့သို့ကောင်းသောဖြေရှင်းနည်းများမရှိကြောင်းသင်သဘောပေါက်သည်။ သင်သည်လစဉ် / နှစ်များအတွက်တင်ပို့ချက်အရေအတွက်ကိုပြသသည့်မော်ကွန်းတိုက်များကိုကြည့်ပြီးခဲတံနှင့်စက္ကူဖြင့်စုစည်းနိုင်သည်။ 😀
မေလ 29, 2008 မှာ 7: 52 pm တွင်
ဝင်ရောက် Douglas Karr: Cyber-Stalker!
j / k '
မှတ်စုတစ်ခုအနေနှင့်၊ MySQL သည် autonumber ကိုကျော်သွားနိုင်သည့်အကြောင်းရင်းများစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ပို့စ်နံပါတ်သည်အရေအတွက်အတိအကျမဟုတ်ပါ။ ရုံဘဏ္Yာရေးနှစ်။
မေလ 29, 2008 မှာ 10: 11 pm တွင်
ကောင်းလိုက်တဲ့ Doug ။ မင်းဒီနည်းလမ်းကိုရှာနိုင်မယ်ဆိုတာငါမသိခဲ့ဘူး၊
အကယ်၍ ဘလော့ဂ်သည် Archive နှင့်ပတ်သက်သောလင့်များကိုဖုံးကွယ်ထားပြီး၎င်းသည်၎င်းသည်ဘလော့ (သို့) စာမူအနည်းငယ်သာရှိသော spam ဘလော့တစ်ခုဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးလိုပါကကျွန်ုပ်အများအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ Firefox browser ရှိ RSS ခလုတ်ကို နှိပ်၍ feed ကိုကြည့်ရှုရန် ။ WordPress RSS ပို့စ်များအတွက်ပုံမှန်သတ်မှတ်ချက်သည် ၁၀ ဖြစ်သည် (များသောအားဖြင့်ထိတွေ့မှုမရှိခြင်း) ဖြစ်သည့်အတွက်ဤအရာထက်ပိုသောပို့စ်များသည်၎င်းသည်ဘလော့ဂ်အသစ်ဖြစ်သည်ဟုများသောအားဖြင့်ပြောတတ်ကြသည်။ (spam ဘလော့ဂ်တော်တော်များများသည်“ hello world” ရှိသေးသည်။ post)
ငါလုံးဝလုံးဝ untech ။ အပေါ်ကအကြံဥာဏ်တွေကအများကြီးပိုအသုံးဝင်ပါတယ်။